Andrey Koptelov's Lahatsoratra momba Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Andrey Koptelov
Andrey Koptelov dia mpandalina momba ny fanavaozana ao amin'ny Itransition, orinasam-pampandrosoana lozisialy mahazatra izay manana foibe any Denver. Miaraka amin'ny traikefa lalina amin'ny IT dia manoratra momba ny haitao vaovao sy ny fanavaozana vaovao ao amin'ny IoT, ny faharanitan-tsaina artifisialy ary ny fianarana milina izy.
Fomba 4 manatsara ny varotra haino aman-jery sosialy ny fianarana ny masinina
Alahady, Desambra 20, 2020 Alahady, Desambra 20, 2020 Andrey Koptelov
Miaraka amin'ny olona marobe tafiditra amin'ny tambajotra sosialy an-tserasera isan'andro, ny media sosialy dia nanjary ampahany lehibe amin'ny paikady marketing ho an'ny orinasa isan-karazany. Nisy mpampiasa Internet 4.388 miliara manerantany tamin'ny taona 2019, ary 79% amin'izy ireo no mpampiasa sosialy mavitrika. Global State of Digital Report Rehefa ampiasaina stratejika, ny marketing amin'ny media sosialy dia afaka mandray anjara amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa iray, ny firotsahana ary ny fanentanana azy, fa ny hoe eo amin'ny media sosialy dia tsy midika hoe fampiasana